Lamaane Soomaali wada ah Oo qaab yaab leh isku waayay-Dhacdo Xanuun ah - Hablaha Media Network
Lamaane Soomaali wada ah Oo qaab yaab leh isku waayay-Dhacdo Xanuun ah
HMN:- Qisadan ayaa waxay dhex martay lamaane Soomaaliyeed oo lagu kala magacaabo Xuseen iyo Basra, Basra ayaa xiriir lasoo sameysay wariya-yaasha barnaamijka xiisaha badan Ee Sirta Nolosha ee aad kala socotaan WACDARAHA.COM.
Waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho kuna soo bar baaray, marakii ay dagaaladu dhaceen ayaan Ka soo qaxnay reerkeena oo dhan waxaanu imaanay magaaladda Nairobi oo ay ehelkeenu daganaa, halkaas ayaa nalagu soo dhaweeyay nolol iyo waxbarashaba aan ka helnay,
waqtigaasna waxaan ahaa gabar da’yar oo aan shukaansi waxba ka aqoonin ninki i soo fiiriyaba waan ka cabsan jiray,
waayo waxaan maqlay intii dagaaldu wadankeenu ka socdeen gabdho fara-badan ayaa la fara xumeeyay ninkii ila hadlaba waxaan u malaynayay inuu i kufsanayao sidaas ayaan ragga oo dhan uga gaabsan jiray’.
Hadaba Maalin malmaha ka mid ah ayaa waxaa dibada iga soo dalbaday nin aya aabe si fiican isugu dheer yihiin wiil uu dhalay oo ku noollaa dalka Maraykanka,
maadaaama gabadhii iga wayneyd ay laba bil kahor uu aabo nin tolka ah ku daray, iyaadaoo aan ku qanacsaneen,hadana way iska ogolaatay ducada waalidka ayay iska qaadatay waanay ku aflaxday guurkeedana hada way ku faraxsan tahay.
Markii uu aabe sheekadii ii sheegay waan ooyay waxaan ku dhahay aabe ninkaasi ma’aqaani wuxuuna joogaa Maraykanka Maraykankana wax ehel ah kuma lihi sideen ugu noolaan doonaa?
Ha yeshee aabe wuxuu iigu jawaabay, walaashaa markii ninka loo guurinaayay way ooynayasay hadana fiiri reerkeeda way ku faraxsan tahay, hadaba aabe ducadayda qaado wiikaas aabihiis ayaan aqaana reerkooda oo dhan ayaan aqaan inkastoo aanan isku qoys ahayn hadana waa reer fiican.
Maalmo kadib willkii ayaa ila soo xiriiray shukaansi ayuu iigu bilaabay anigaana wax aan ku jawaabo iyo wax aan ku hadlo ayaan garan waayay wuxuu ahaa ninkii iigu horeeyaay oo aan la sheekaysto waxaan ku dhahay walaalow aniga kuma aqaani una malayn maayo arinkan inuu socon doona,
maxaa yeelay labada qof oo is guursanaaya waa inay is jeclaadaan anigana wax jaceyl ah kuuma qabo ee walaalow gabar ku jecel raadso aniga wax jaceyl ah kuuma qabo.
“kkkkkk” wuu igu qoslay wuxuuna yiri “anigaa jeceylka ku baraaya waxa uu yahay, hooyaday iyo aabahaygaba iyagoon is aqoonin ayaa laysku daray hadana wax ay iska jeceyl yihiin malaha, 10 carurna waa ay isku dhaleen, adiga uun halagaa helo daacadnimo inta kale way hagaagayaan”.
Runtii wuxuu ahaa wiil kaftan badan inta badan telefanka isagaa hadlaayay anigana waan dhagaysanayay, wuuna ila dhacay hadaladiisana waxaa u badnaa macaan.. xabiibti… gacaliso E.t.c.
Maalmo kadib waxaaa go’aan lagu gaaray in meherka la dedejiyo, sidii ayayna arkinii ku dhacday anigoo aan diyaar u ahayn oo iska murugaysan ayay walaashay igu tiri “abaayo waxba ha welwelin adigaa iga nasiib fiican Maraykan ayaad u socataa aniga halkaan uun baa ku dhal dhalayaa inta ay caloosheeda taabatay .
Marksaas ayaan ku soo booday waxaana ku
dhahay abaayo Mabruuk uur miyaa leedahay Masha’Allah,
welwelkii oo dhan wuu iga tagay sheekooyin dhaadheer ayaan isla galnay waxan aad uga xumaa inaan reerkayga ka dhax baxaayo oo aan keligeey meel cidla ah ilmo ku dhalo nin aan aqoonin iyo magaalo aanan aqoonin “Wareer Badanaa”
Meherkii ayay dhacay maalin Jimco ah bisha Oktoobar sanadku markuuu ahaa 1996 -kii.laba bilka dib ayuu ii soo diray lacag aan ku dhoofo nin muqalis ah ayaa i waday wuxuuna i geeyay wadanka Norway halkii aan iska dhiibay oo aan qaxooti cusub ku noqday kaam ayaan galay waxaan bilaabay nolol cusub ninkiina sidii ayaan u xiriiri jirnay sharci fiican uu ku imaado malahayn wuxuuna igu dhahay adiga soo bax muqalas ayaan kuu soo dirayaa waan ka ogolaaday waxaan ku noollaa meel kaam ah muddo dhan lix billod ah waxaan la kulmay dad kala duwan wiilal iyo gabdhaba saaxiibo fiican iyo kuwo xunba. khibrad fiican ayaan ka helay keli noolaanshaha.
Waxaana ahaa gabar aad isaga adag maalin maalmaha kamid ah ayaa sida caadiga ninkaygii ila soo hadlay waxaa Mobile-kayga ka qabtay gabar aan saaxiibo nahay wiil la-dhashay, kadibna telelefankii ayuu ii keenay aniga iyo saaxiibtaydana qolka jiifka ayaan ku sheekaysanaynay.
Markiiba wuxuu igu bilabay ninkaan muxuu ahaa iyo su’aalo fara-badan oo aan qarkood aad iyo aad uga xanaaqay waxaana u shaaagay sida ay wax u jiraan hal habeen xitaa iguma soo dhicin anigoo nin leh inaa nin kale la shekaysto, waxaana ku dhahay shaydaanka iska naar, waxaan ahay gabar wanaagsan oo Alle iyo Rasuul taqaana.
Hase ahaatee waa ay u cuntami waysay shakigii ayaa ku waynaaday xiriirkaynii wuu yaraaday xaga teleefanka, anigana waxaa go’aan ku gaaray inaan Norway isaga tago maadaama aanan sharci ku lahayn ninkii iga dhoofin haana uu iska gaabsaday.
Mudo laba bilood ah markaan kala aamusneen ayaan muqalas raadsaday sidii ayaana ku tagay dalka boqortooyada ee Ingiriiska anigoon waxba la-socodsiin, maalmo kadib markaan howshii isdhiibida iyo wareysiyada iga dhamaadeen ayaan kaar soo gatay una sheegay isagii halkaan joogo.
Aad iyo aad ayuu u xanaaqay in uu telefanka kasoo dhex baxo ayaan ka cabsaday wuxuuna igu jawaabay adiga go’aankaaga waad gaartay anigana go’aankayga waan gaari doonaa, durbabo reerkayga ayaan u sheegay wixii ina dhex maray, isla-markaana wuxuu diiday inuu i furo ilaa aan u soo celiyo lacagtii uu igu qarash gareeyay.
Ugu danbeeyntii lacagtii ayaan raadinay ilaa lix kun dollar ayay ahayd markii dambe waa loo-diray, hadase wuxuu ku sugan yahay ma’aqaano anigana ninkale oo ina adeerkayga ah ayaan guursaday caruurna waa leeyahay, balse markasta waxaan isweydiiyaa ninkaas nabsigiisa ugu maqan yahay ? talow goormuu ugu dhici doonaa,Iwm